EYH Series amin'ny lafiny roa Mixer - China Changzhou Daming fanafody Fitaovana
EYH Series amin'ny lafiny roa Mixer tena dia ahitana telo: Fanodina amponga, swinging fitoeran'entana sy ny filanjana azy. Ny Fanodina amponga swinging lainga amin'ny fitoeran'entana, nisy kodia efatra teo tohanan'ny sy ny axial fixation atao roa chock kodiarana. Roa ny kodia efatra no entin'ny miodina rafitra fahefana hanao ny Varingarin'i Ahodina. Ny swinging fitoeran'entana no entin'ny napetraka ny crankshaft oscillating fisotroana izay nitaingina teo amin'ny toe sy ny swinging fitoeran'entana dia tohanana amin'ny filanjana azy.
Ny miodina Varingarin'i ny EYH amin'ny lafiny roa Mixer afaka mihetsiketsika roa-tari-dalana tamin'izany andro izany. Ny iray dia ny fihodinan'ny ny amponga sy ny hafa dia swinging ny amponga teny an-swinging fitoeran'entana. Fitaovana ho mifangaro dia ahodina rehefa amponga dia miodina, ary ho samy hafa sisa sy mahitsy, raha ny Varingarin'i dia swinging. Noho ny filan'ny roa ireo, fitaovana azo afangaro tanteraka ao anatin'ny fotoana fohy. EYH amin'ny lafiny roa Mixer dia mety noho ny fampifangaroana ny vovoka sy granule endrika fitaovana.
Previous: DSH Series Double Sokiro Cone Mixer
Next: HJ Series avo roa heny cone Mixer
Mixer / mifanerasera amin'ny Engine ny Vondrona Fanampiny
Amin'ny lafiny telo ny fihetsika Mixer
Type tavy fisotroana Mixer